Panda Suboo | foodpanda riders MM
ပစ္စည်းတွေနဲ့လဲယူမယ် . . .''
Panda Rider များအားလုံး မင်္ဂလာပါ! နေ့စဉ်နှင့်အမျှ foodpanda customers (ကာစတန်မာများ )၏ လိုအပ်ချက်များကို အချိန်မှီဖြည့်ဆည်းပို့ဆောင်ပေးနေသည့် ကျွန်တော်တို့ panda rider များရဲ့စွမ်းဆောင်ရည် (Performance) နှင့်အစဉ်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်မှုများအပေါ် အသိအမှတ်ပြုသည့် ရည်ရွက်ချက်ဖြင့် Panda Suboo Program ကို panda rider တို့အတွက် ယူဆောင်လာခဲ့ပါပြီ။
Panda Suboo Program ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ ပို့ဆောင်သူတစ်ဦးချင်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည် (Performance) ပေါ်မူတည်ပြီး ပွိုင့်တွေပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်လေ ပွိုင့်တွေများများရရှိလေဖြစ်တဲ့အပြင် ရရှိထားတဲ့ပွိုင့်တွေကိုလည်း စုဆောင်းထားပြီး အစီအစဉ်မှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ လဲလှယ်ရယူနိုင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ လဲလှယ်ရယူနိုင်သည့်ပစ္စည်း Item အမျိုးအစားများကိုလည်း အပတ်စဉ် (သို့) လအလိုက် Panda Suboo အစီအစဉ်မှာ အသစ်များဆက်လက်ထည့်သွင်း ပေးသွားဦးမှာဖြစ်သလို အခါအားလျော်စွာ ဘောနပ်စ်အနေနဲ့ မိမိရဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်မှု အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ပွိုင့်များ အပိုထပ်ဆောင်း ထည့်သွင်းပေးသွားဦးမှာလဲဖြစ်ပါတယ်။
Panda Suboo အစီအစဉ်ကို ပထမစတင်မှုအနေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့က Panda Rider များသာ ပါဝင်နိုင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အစီအစဉ်မှာ
မပါဝင်သေးတဲ့ အခြားကျန်ရှိတဲ့မြို့များမှ Panda Rider တို့အနေနဲ့လည်း စိတ်မပူပါနဲ့။ ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီး ဒီအစီအစဉ်ကိုတိုးချဲ့ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ သက်ဆိုင်ရာချန်နယ်တွေက ကြေညာချက်တွေကို မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပေးနေဖို့မှာချင်ပါတယ်!
လဲလှယ်ရယူနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာ သတ်မှတ်ပွိုင့်တွေရှိပါတယ်။ မိမိစုဆောင်းထားတဲ့ ပွိုင့်တွေနဲ့ လဲလှယ်လိုတဲ့ပစ္စည်းရဲ့ပွိုင့်ကိုမှီမယ်ဆို လဲလှယ်ရယူနိုင်ပါတယ်။ ပစ္စည်းအရေအတွက် အကန့်အသတ်ရှိတဲ့ Item တွေမှာ ဦးရာသူနစ်ဖြစ်တာကြောင့် ပွိုင့်တွေကို အချိန်မှီများများစုဆောင်းပြီး မြန်မြန်လဲလှယ်ယူထားဖို့တော့ လိုပါမယ်။ (Panda Suboo အက်ပ်အတွင်းမှတဆင့် လဲလှယ်ဖို့တောင်းဆိုသည့်ရက်မှစ ၅-၇ ရက်အတွင်း ပစ္စည်းထုတ်ယူနိုင်မယ့် အချက်အလက်အသေးစိတ်ကို ပို့ဆောင်ရေးအက်ပ်ရဲ့> Inbox မှတဆင့် ရရှိမှာပါ)
Panda Suboo အက်ပ်ပလီကေးရှင်းကို ဖုန်းထဲမှာ ဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလဲ?
မိမိတွင် ပွိုင့်အလုံအလောက်စုဆောင်းထားရှိပါက လဲလှယ်လိုသည့် ပစ္စည်းအားနှိပ်ပြီး စာမျက်နှာ၏ အောက်ခြေတွင်ရှိသော ''လဲလှယ်မည်'' ခလုတ်အားနှိပ်ပါ။
''Redeem လဲလှယ်ခြင်း'' စာမျက်နှာအားနှိပ်ပြီး လဲလှယ်ရယူလိုသည့် item ပစ္စည်းအားနှိပ်ပါ။
လဲလှယ်မည့်ပစ္စည်းအရေအတွက်အားရိုက်ဖြည့်ပြီး ''လဲလှယ်မည်'' ကိုနှိပ်ပါ။
လဲလှယ်ရန်တင်သွင်းရက်သည့်မှစ (၅ - ၇ ရက်အတွင်း) သက်ဆိုင်ရာရုံးဘက်မှ ပစ္စည်းထုတ်ယူနိုင်မယ့် အချက်အလက်အသေးစိတ်ကို ပို့ဆောင်ရေးအက်ပ်ရဲ့> Inbox မှတဆင့် ပေးပို့လာမှာပါ)။ ပြီးသည့်နောက် အကြောင်းကြားစာတွင်ပါရှိသည့် သတ်မှတ်ရက်၊ ရုံးလိပ်စာအတိုင်း လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါမည်။
foodpanda သို့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ မှန်ကန်စွာတင်သွင်းထားပြီး လက်ရှိ foodpanda နှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် Active ပို့ဆောင်သူများသာ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့်ရှိပါမည်။
လက်ဆောင်ပစ္စည်းများလဲလှယ်ပြီး ကျန်ရှိသည့် ပွိုင့်များကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်းသာ (နိုဝင်ဘာလနှင့် ဒီဇင်ဘာလကုန် ၂၀၂၁ အထိ) နောက်လများအတွက် ထည့်ပေါင်းသယ်ယူခွင့်ရှိသည်။
ပွိုင့်နှင့် လဲလှယ်ရယူနိုင်သည့် Item ပစ္စည်းအရေအတွက် ကန့်သတ်မှုအချို့ရှိသည့်အတွက် ဦးရာလူစနစ်ဖြင့်သာ လဲလှယ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လဲလှယ်လိုသည့် Item ပစ္စည်းမရှိခဲ့ပါက ကျန်ရှိသည့် Item ပစ္စည်းများကို မိမိတွင်ရှိသည့် ပွိုင့်များနှင့်လဲလှယ်ရယူနိုင်ပါမည်။
ပွိုင့်သတ်မှတ်ပေးသည့်စနစ်အပါအဝင် လဲလှယ်နိုင်သည့်ပစ္စည်းများ၏ သတ်မှတ်ပွိုင့်များနှင့် စည်းမျဥ်း၊ စည်းကမ်းများအား အခါအားလျော်စွာ ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်သည်ကို အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သူများအနေဖြင့် သိရှိနားလည်ထားရပါမည်။
အစီအစဉ်တွင် အငြင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စတစ်စုံ တစ်ရာဖြစ်ပေါ်ပါက foodpanda Myanmar ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည်သာ အတည်ဟုမှတ်ယူရပါမည်။
အပတ်စဉ် Batch (1) သို့ တစ်ကြိမ်ရောက်ရှိတိုင်း ပွိုင့် (၁၅၀၀) ရရှိပါမယ်။